Kharashaadka dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika ayaa hoos u dhacay 74.1% sanadka 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Kharashaadka dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika ayaa hoos u dhacay 74.1% sanadka 2020
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • Wararka Mexico • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Soo -kabashada saadaasha Waqooyiga Ameerika waxay daba socotaa is -afgaradka guud ee socdaalka adduunka oo ah in dalxiiska gudaha uu marka hore soo kaban doono marka la gaaro 2022, laakiin imaatinka caalamiga ahi ma soo kaban doono illaa 2024 -ka.
Wadarta imaatinka caalamiga ah ee gobolka ayaa hoos u dhacday 67% sanadka 2020.
Kharashkii gudaha ee gobolka ayaa hoos u dhacay 74.1%.
Saadaasha kharashaadka dalxiiska ee soo galaya waxay soo jeedinayaan inaysan dhaafi doonin heerarkii cudurka faafa kahor ilaa 2025.
Goobaha loo safro ee Waqooyiga Ameerika (USA, Mexico iyo Canada) waxay ku jiraan heerar kala duwan oo ah horumarinta dalxiiska. Si kastaba ha noqotee, hal arrin oo caadi ah ayaa ah in saamaynta masiibada COVID-19 ee 2020 si aad ah looga dareemay dhaqaalah kasta ee dalxiiska.
Warbixintii ugu dambaysay ee 'Fahanka Suuqa Dalxiiska Dalxiiska: Waqooyiga Ameerika (2021)' ayaa lagu ogaaday in wadarta guud ee imaanaysa gobolka ay hoos u dhacday 67% sanad-dugsiyeedka (YoY) sanadka 2020 iyo kharashaadka soo gala 74.1%. Soo-kabashada saadaasha Waqooyiga Ameerika waxay daba socotaa heshiiskii guud ee socdaalka adduunka ee ahaa in dalxiiska gudaha uu ka soo kaban doono marka hore (2022), laakiin imaanshaha caalamiga ahi ma soo kaban doono ilaa 2024. Saadaasha kharashka dalxiiska ee gudaha, si kastaba ha ahaatee, waxay soo jeedinayaan in tani aysan dhaafi doonin heerarkii hore ee masiibada ilaa 2025 ka dib.
COVID-19 ayaa weli loo aqoonsan karaa inuu yahay halista ugu weyn ee koritaanka ee ka jirta waaxda socdaalka, Waqooyiga Ameerikana taasi waxba kama duwana.
Luminta kharashaadka dalxiiska gudaha ee 2020 (-74.1%) ilaa USA, Mexico iyo Canada waxay ahayd mid muhiim ah. Saadaashii ugu dambaysay waxay soo jeedinaysaa inaan la fileyn inay si buuxda u soo kaban doonto illaa 2025 ka dib, tanina waxay noqon doontaa mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee saameeya soo kabashada dhaqaalaha gobolka dhowrka sano ee soo socda.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee dalxiiska gudaha ku jira ayaa ah kharash -garaynta, kaas oo kor u qaadi kara dakhliga dhaqaalaha, kobcin kara shaqaalaynta iyo u -hawl -galaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Meel kasta oo la tago waxay leedahay dalab dalxiis oo gudaha ah oo xoog leh, laakiin tan kaliya laguma tiirsanaan karo si looga gudbo burburka safarka caalamiga ah.
U safrida Waqooyiga Ameerika meelo kale oo adduunka ah waxay noqon kartaa qaali. Sahan dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 23% jawaabeyaasha caalamka ay hoos u dhigeen miisaaniyaddii qoyskooda sannadkii la soo dhaafay halka 27% ay 'xoogaa' yareeyeen. Miisaaniyadaha la dhimay micnaheedu waa kharash yar oo ku baxa madadaalada oo saameeya awoodda safarka. Caqabadaha miisaaniyaddu waxay noqon doonaan kuwo aad muhiim ugu ah iibsashada waayo -aragnimada safarka sannadaha soo socda, taas oo halis gelin karta soo -kabashada dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika marka la barbar dhigo gobollada kale ee adduunka.
Sababtoo ah u dhawaanshaha, isku xirnaanta iyo tartamayaasha xamuulka qaaliga ah (LCC), socdaalka u dhexeeya Mareykanka, Kanada iyo Meksiko wuxuu noqon karaa mid aad qaali u ah, oo kicinaya safarka meelaha loo safro. Socdaalka gobalku wuxuu muhiim u noqon doonaa dib u soo kabashada dalxiiska ee Waqooyiga Ameerika. Meel kasta oo la aado waxay si weyn ugu tiirsan tahay meelaha deriska ah oo ah ilaha muhiimka u ah dakhliga dhaqaalaha.
Laga soo bilaabo dhul -dabiiciyo baaxad leh oo ay ka mid yihiin aagagga xeebaha, jardiinooyinka qaranka iyo safafka buuraha ilaa magaalooyin buuqsan oo ay ka buuxaan astaamo dhaqameed, Waqooyiga Ameerika waxay ka faa'iideysanaysaa dalab dalxiis oo xooggan. Sidaa darteed, waxaa jira arrimo badan oo jiidaya oo soo jiita booqdayaasha adduunka oo dhan firaaqada iyo ganacsiga. Marka lagu daro meelaha soo jiidashada leh ee la booqdo, suuqgeeda weyn ee VFR (booqashada saaxiibbada iyo qaraabada) sidoo kale waa muuqaal xoog leh. Wadashaqaynta u dhaxaysa ururada suuqgeynta caga -dhigashada (DMOs) iyo hay'adaha dawladda ayaa muhiim u noqon doonta si loo hubiyo gargaarka dhaqaale ee gobolku hore u socdo.